Nhau - Gore rakapera, 11.0 GWH yepasi rose lithium mabhatiri emidziyo yemagetsi yakatumirwa, makumi masere muzana ayo akadyiwa mumafekitori eChina.
Li-ion Bhatiri / Bhatiri Pack
Ni-cd Battert / Bhatiri Pack
Ni-mh Battert / Bhatiri Pack
Mwaka wadarika, 11.0 GWH yepasi rose lithium mabhatiri emidziyo yemagetsi yakatumirwa, makumi masere muzana ayo akadyiwa mumafekitori eChina.
Lithium bhatiri rakasangana nekutsiva nickel cadmium bhatiri uyezve kune nickel hydrogen bhatiri. Kubva pakuona kwemakero chikero, musika wepasi rose chiyero che lithiamu bhatiri yezvishandiso zvemagetsi zvinosvika 9.310 bhiriyoni yuan mu2019, uye musika chikero che lithiamu bhatiri remidziyo yemagetsi muChina ichasvika 7.488 bhiriyoni yuan.
Munguva pfupi yapfuura, evtank, inzvimbo yekutsvagisa, yakabatana yakaburitsa pepa jena nezve kuvandudzwa kweChina chishandiso chemagetsi indasitiri (2020) pamwe neIvey Economic Research Institute. Mune chena bepa, evtank yakaitisa yakadzama tsvagurudzo uye Ongororo pane yakatumirwa vhoriyamu, musika chikero, makwikwi maitiro emagetsi maturusi emabhizinesi, kunze kwenyika mamiriro emagetsi maturusi emabhizinesi, uye bhatiri mamiriro emagetsi maturusi, uye akaita yakazara kudzidza uye Kuongorora pane iyo hombe zvigadzirwa zvepamusha Kuongororwa kwebenchmarking yemagetsi maturusi emabhizinesi kunoitwa.
Sekureva kwebepa jena rakaburitswa neIvey Economic Research Institute, pamwe nekuvandudzwa kwemidziyo yemagetsi isina tambo, huwandu hwamasero anodiwa pachigadzirwa chemagetsi chimwe chete chiri kuwedzerawo, uye kutumirwa kwemabhatiriyiti etiyamu emidziyo yemagetsi anga achikura nekukurumidza. Mu2019, iyo yepasi rose lithiamu bhatiri rekutakura emagetsi maturusi inosvika 11.0gwh, iine gore-gore-gore kukura kwe25.0%, uye kudiwa kwema lithiamu mabhatiri mumagetsi eChina chishandiso musika i8.8gwh, iine gore- pagore. kuwedzera kwe25.7%.
Sekureva kwebepa jena, mabhatiri e lithiamu akasangana nekutsiviwa kwemabhatiri enickel cadmium uyezve kune nickel hydrogen mabhatiri. Panyaya yemusika musika, wepasi rose musika chikero che lithiamu mabhatiri emagetsi maturusi anosvika 9.310 bhiriyoni yuan mu2019, uye musika chikero che lithiamu mabhatiri emagetsi maturusi muChina achasvika 7.488 bhiriyoni yuan.
Wu Hui, maneja mukuru weDhipatimendi Rezvekutsvagisa reIvey Economic Research Institute, akataura kuti lithiamu mabhatiri emagetsi maturusi anoda mwero mashandiro, saka chikumbaridzo chavo chakakwirira kupfuura zvakajairika magetsi erudzi mabhatiri. Kwenguva yakareba, mabhatiri emidziyo yemagetsi mupasi anga achitorwa neSamsung SDI, Panasonic, Murata, LG uye mamwe makambani emabhatiri eJapan neSouth Korea. Zvisinei, mumakore achangopfuura, mabhizinesi echiChinese akadai saYiwei lithium simba, Tianpeng, haisida uye mamwe mabhizinesi atanga kuve mazhinji Mugove wemusika wemabhizimusi emabhatiri emumba mune yakakwira lithiamu bhatiri yezvishandiso zvemagetsi munyika zviri kuwedzera zvishoma nezvishoma.
Wu Hui akataura kuti parizvino, mabhatiri makuru emagetsi maturusi ari cylindrical 1.5Ah uye 2.0ah. Makambani emabheja ekumhiri kwemakungwa akatove akapa 2.5ah maturusi ebhatiri muhuwandu hwakawanda. Chinese makambani emabhatiri akadai saYiwei lithium simba anozopawo mabhatiri e2.5ah muna 2020. Zvakakosha kuziva kuti ATL nemamwe mabhizimusi akapfava emabhatiri ari kuyedzawo kushandisa avo akapfava maseru epakeji mumunda wezvishandiso zvemagetsi.
Mune chena bepa pane kuvandudzwa kweChina yemagetsi chishandiso indasitiri (2020), Ivey Economic Research Institute yaita zvakadzama ongororo pazvinhu zvakakosha hunhu uye maindasitiri cheni yemagetsi maturusi, yepasi rose kutumira vhoriyamu uye musika chikero chemhando dzakasiyana dzemagetsi maturusi, China dzakasiyana mhando dzesimba maturusi anotumirwa uye musika saizi, yedunhu uye bhizinesi makwikwi mapatani emagetsi chishandiso indasitiri, uye mamiriro ekunze uye mamiriro ekunze emagetsi chishandiso indasitiri Iyo yekunze huwandu uye matunhu, zvigadzirwa uye bhizinesi mamiriro eakakosha simba chishandiso mabhizinesi, uye bhizinesi mamiriro eakakura emagetsi chishandiso bhatiri vatengesi vanoongororwa zvakadzama, uye indasitiri yezvigadzirwa zvemagetsi mumakore mashanu anotevera akaongororwa nekutarisirwa.
Post nguva: Sep-11-2020
Muhafu yekutanga yegore, China prod ...
Kukwira kwemutengo weCobalt kwakapfuura tarisiro ...
Gore rapera, 11.0 GWH yepasi rose lithium bat ...
Simba rechokwadi rakapinda HK yakanaka 12th Gumiguru 2019.
Kuongorora kwe lithiamu bhatiri uye nyowani simba ...
12v Lithium Ion Inotakurisa Bhatiri, 18650 Nimh, Li Bhatiri, 12 Volt Inotakurisa Lithium Battery Pack, Lithium Ion Polymer Bhatiri, 3.7 Rechargeable Bhatiri, Zvese Zvigadzirwa